M/weyne Shariif oo guul ku tilmaamay dilkii Fasul C/llaahi, kana hadlay xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya. – Radio Daljir
M/weyne Shariif oo guul ku tilmaamay dilkii Fasul C/llaahi, kana hadlay xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya.
Juunyo 12, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, June 12- M/weynaha dawladda federaal KMG ah ee Soomaaliya ayaa guul weyn ku tilmaamay dilkii hoggaamiyihii Al-qaacidada bariga Afrika Fasul C/llaahi Maxamed, isagoo dhinaca kalena xusay lagama maarmaan-nimada fulinta heshiiskii Kampla.
M/weynaha Shariif Sh Axmed oo maanta shir jaraa’id ku qabtay aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa tilmaamay dilka Fasul C/llaahi Maxamed in ay tahay tallaabo hormar ah oo laga gaaray dagaalka lagula jiro kooxaha xag-jiriinta ah ee dunida, isagoo dhinaca kalena siweyn ugu hambalyeeyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Mudane Sh Shariif, waxaa sheegay hoggaamiyaha la dilay in uu qayb-weyn ku lahaa xasilooni-darrada waddanka Soomaaliya, uuna soo maleegay qaraxyo iyo shir-qoollo lagu dilay madax badan oo dawladda ka tirsanaa isagoo soo hadal-qaaday qaraxii hotel Shaamow oo ay ku dhinteen afar wasiir oo ka tirsanaa dawlddiisa iyo qaraxii Beledweyn oo isna ay ku naf-waayeen madax uu ka mid ahaa wasiirkii hore ee amniga qaranka.
M/weyne Sh Shariif, waxaa uu saxaafadda u soo bandhigay Documents-yo laga helay hoggaamiya la dilay ee Fasul C/llaahi Maxamed kuwaasi oo ay ku jireen baasaboorro, masawirro, qoraallo caddaynayey xiriirkiisa Al-qaacida oo ay ka mid ahaayeen sida la tilmaamayo waraaqo loogu tacsiyeey dhimashadii Sh Cusaama Billaadin.
M/weyne Shariif, ayaa shirkaasi jaraa’id sidoo kale uga hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda waddanka isagoo soo hadal-qaaday shirkii dhawaan k soo gaba-gaboobay magaalada Kampla ee waddanka Yugaandha, sheegayna in uu lahaa nuxur waxtar u leh bad-baadada umadda Soomaaliyeed. waxaana caddeeyey lagama maarmaan-nimada in la hor-geeyo golaha baarlamaanka qodobadii ka soo baxay.
Gaba-gabadiina m/weynuhu waxaa uu bogaadin u diray waddamada dawladdiisu ay ka hesho taakulooyinka dhaqaale, kuwa siyaasadeed iyo kuwa ka taageera xagga ciidamada, isagoo ku tilmaamay waddamadaasi in ay yihiin kuwa hirgaliyey horu-kaca iyo hana-qaadnimada dawladda.
Sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka daraawiisha Puntland oo lagu dilay Bossaaso; taariikhdiisa oo kooban.
Baahin: Sabti, Jun 11, Weriye Adam Shardi ~ Daljir ~ Garowe. R/wasaare Farmaajo oo is-casilaadiisa shuruud uga dhigay codka mudanayaasha baarlamaanka; Xil. Xareed oo qorshaha is-casilaada ee R/wasaare Farmaajo ku sifeeyey sharci darro; Mudaaharaad lagu taageeray R/wasaare Farmaajo oo ka dhacay magaalada Buuhoodle, Cayn; Aas qaran oo loo sameeyey wasiirkii amniga ee dawlada federaalka ah ee Somaliya.